Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Prayer ဆုတောင်းခြင်းအမှု
မက်ဆေ့ခ်ျတခုရတယ်။ ဆုမတောင်းလင့် အမှောင်ထုသည် လင်းလာမည်မဟုတ် Pray not, the darkness will not be brighten. လို့ Sir Edwin Arnold က ပြောထားပေမဲ့ ဆုတောင်းပေးလို့ ဘယ်သူနစ်နာသွားသလဲလို့ တခါတခါ စဉ်းစားနေမိတယ်။ Happy Birthday! ဆရာ။
ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကာ ဆုတောင်းတာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်စေချင်တာကိုပြောတာဖြစ်ဖြစ် အကျိုးရနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဘယ်သူကလာကန်တော့ကန်တော့ ပါးစပ်ကတော့ သာဓုမခေါ်ဘူးပါ။ အန်တီကပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်း ရေးထားတယ်။
ကျွန်တော် ညတိုင်းလိုလို အိပ်ကာနီးတိုင်း ဆုတောင်းတယ်။ အထူးအာရုံပြစရာတခုခုရှိရင် အဲတာကိုအရင်နဲ့ အမြဲမပြတ်တာကတော့ နေမကောင်းလို့မေးသူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရတဲ့ မင်္ဂလသုတ်ထဲက တပိုဒ်ကို တခါခါ ပါဠိတမျိုးတည်း တခါခါမြန်မာဘာသာပြန်ပါ ရွတ်ဆိုပြီးမှ ဆုတောင်းတယ်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်နိုဝင်္ဘာလထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးက လာဖမ်းလို့ ထွက်မပြေးခင် မြန်မာပြည်ထဲမှာ ပုန်းနေရတုန်းက ဇာတိရွာဆရာတော်ကနေ ဗလာစာအုပ်ထဲက ဆုတ်ယူထားတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာ သူ့လက်ရေးနဲ့ ခဲတံနဲ့ ရေးပေးထားတဲ့ မင်္ဂလသုတ်ထဲကတပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆို ၂၇ နှစ်နဲ့ ငါးလရှိပြီ။ ရက်ပျက်တာတွေလည်း အမှန်ကယ်ရှိပါတယ်။ အကျိုးရှိတယ်လို့ အခုစာရေးနေချိန်အထိ ထင်သေးတယ်။ စာရေးဖြစ်သွားလို့ ကျေးဇူး။